SketchUp - MYSTERY ZILLION
September 2009 edited September 2009 in AutoCAD
I want SketchUp Tutorial video file. Please Help!!!!!!!!!
နောက်ဆုံးမရရင်တော့ YouTube ကိုသာ သွားပြီး Sketch Up လို့ ရိုက်ရှာလိုက်ပေါ့.. အမျာကြီးတွေ့လိမ့်မယ်ခင်ဗျ..
ဖြေပေးတဲ့ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ utube က u နဲ့ကျော်မှ ရတယ်။ u နဲ့ကျော်ရင်လည်း တခါတလေကျရင် blue screen ဖြစ်သွားလို့။ ( ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူး..... :O